Inona avy ireo fiasa miafina ao amin'ny Gmail? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Inona avy ireo fiasa miafina ao amin'ny Gmail?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 725
Indraindray isika mahatsapa izany mandany ora maro hijerena ireo mailaka izahay ary hanatrehana ny boaty fidirana dia mitranga izany amin'ny sehatra hafa ary angamba amin'ny Gmail. Na izany aza, nasain'i Google nanararaotra betsaka ny mpampiasa azy ny Gmail tamin'ny alàlan'ny fitaovana hamongorana ireo asa miverimberina.
Haneho anao izahay,
Inona ireo fiasa miafina an'ny Gmail.
Alefaso any amin'ny "Torimaso" ny mailakao: Ity fiasa ity dia ahafahanao misafidy ireo mailaka ary esory ny boaty fampidirana hametrahana daty vaovao, izany hoe hiseho amin'ny ora voatondro ny boaty. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampiasainao ny fitaovana "Snooze" na "Snooze".
Fampahatsiahivan-tena: Mametraka mailaka eo an-tampon'ny boaty mailaka ny Gmail raha sanatria ka tsy misy fanarahana mandritra ny andro maromaro.
Mikarakara hetsika iray amin'ny Alimanaka avy amin'ny Gmail: Ny kalandrie dia rindranasa Google, izay eo amin'ny ilany ankavanan'ny Gmail ary mamela anao handamina hetsika iray na hisafidy fampahatsiahivana.
Fikambanana amin'ny antsipiriany: Mampiasà marika sy sivana ahafahanao mandamina ireo mailaka tonga avy amina mpandray iray na voatonona miaraka amin'ny teny manokana, dia hatao ho azy izany.
Maminany mialoha izay ho soratanao i Gmail: Manana endri-javatra marani-tsaina roa ny Gmail ahafahanao mameno fehezanteny sy manome valiny ho an'ny hafatra tonga. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampiasainao ny "Smart Reply" na "Smart Compose", fiasa izay mitahiry litera tsy voasoratra an'arivony tapitrisa tapitrisa.
Adiresy mailaka marobe: Raha te hanana kinova maromaro amin'ny adiresinao ianao, dia ampio fe-potoana farany amin'ny adiresy mailakao. Ohatra: [email voaaro] fa [email voaaro]. O [email voaaro] na fiovana hafa, nandefa mailaka mitovy ihany i Google.
Fitambaran-dàlana fitendry: Mamela anao hitahiry fotoana sy hiditra mivantana, hahazoana boaty pop-up tsy maintsy tsindrio? ary hiseho ity lisitra manaraka ity:
Ctrl + Enter midika hoe mandefa hafatra.
Ctrl + Shift + b midika hoe ampio ireo mpandray Bcc.
Ctrl + Shift + c midika hoe ampio mpandray cc.
Ctrl+. midika hoe mandroso amin'ny varavarankely manaraka.
Hitsin-dàlana avo lenta: Manana ny fiasan'ny hitsin-dalana manokana izy io ary miovaova izy ireo rehefa manokatra varavarankely vaovao ianao hanoratra mandra-pamindranao ny resaka amin'ny fako.
Raha te hanao ireo fandrosoana mandroso ireo dia tokony handeha:
Tabilao fanovana ao amin'ny zoro havanana havanana.
Fandraisana mivantanafitendry s.
Lisitry ny toe-javatra mandroso:
/: apetraho ao anaty boaty fikarohana ny cursor
c: manoratra hafatra vaovao
d: manorata hafatra amin'ny kiheba vaovao
Avereno jerena ireo hafatrao: Raha te-hanafoana ireo hafatrao ianao dia tsy maintsy manao famandrihana kaonty mailaka izay manao kopia voafafa ary manamboatra azy io amin'ny kaontinao Gmail ianao, mba handefasako ireo mailaka amin'ny boaty lehibe.
Mandehana any amin'ny toerana misy anao.
Avereno indray kopian'ny mailaka ho avy.
Fenoy ny adiresy ny mailaka.
1 Inona ireo fiasa miafina an'ny Gmail.
2 Raha te hanao ireo fandrosoana mandroso ireo dia tokony handeha:
3 Lisitry ny toe-javatra mandroso:
4 Ataovy izao:
Inona avy ireo asan'ny Gmail?
Ahoana ny fomba hiarovana ny kaontiko ao amin'ny twitter?